ချစ်သက်တမ်း(၅)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အမှတ်တရနေ့လေးမှာ ကျေနပ်ကြည်နူးနေတဲ့အမွန်း - Cele Gabar
ချစ်သက်တမ်း(၅)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အမှတ်တရနေ့လေးမှာ ကျေနပ်ကြည်နူးနေတဲ့အမွန်း
နိုင်ငံရပ်ခြားအထိအောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ အမွန်းတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပါ။ အမွန်းကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်လူသိများသူတစ်ယောက်ပါ။ “ဒုဌဝတီကိုကျော်လွန်၍” ဇာတ်ကားနဲ့လည်း သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိထားသူပါ။
သူကတေ့ာအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားတာပါ။ အခုလည်း ချစ်သက်တမ်း(၅)နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အကြောင်းကို “Cheers mon amour !5years down, forever to go !! ချစ်သူသက်တမ်း ငါးနှစ်ပြည့်ပီချစ်သူ ! ( နောက်နှစ်ဒီချိန်ဆို နှစ်ယောက်သား စတေးတပ်စ်ပြောင်းပြီ ) ချစ်တယ်နော် , ဒါပဲ , ဂွပ် !” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားခဲ့သလို ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း တင်ထားတာပါ။
အမွန်းတို့ကတော့ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့လက်တွဲထားတာဖြစ်ပြီး မိဘစုံရာနဲ့စေ့စပ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ချစ်သက်တမ်း(၅)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်စတေးတပ်စ်ပြောင်းတော့မယ့်အကြောင်း ပြောသွားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
Source : AhMoon
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, အမွန်း
Previous post လူရာဝင်အောင် ဘာတွေလုပ်ရသလဲ မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ သားညီ
Next post ဖိုးပြည့်ရဲ့ “ကိုယ်စောင့်နတ်” သီချင်း MTVလေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မေမြင့်မိုရ်